မိမိကွန်ပျူတာ RAM ထပ်တိုးမြင့်နည်း | Mobile Master (ပခုက္ကူ-ကမ္မ)
မိမိကွန်ပျူတာ RAM ထပ်တိုးမြင့်နည်း
RAM နည်းလို့ RAM ထပ်တိုးချင်တဲ့သူများအတွက် မိမိတို့ကွန်ပျူတာမှာ RAM ထပ်မြှင့်တဲ့နည်းလေးပါ...တော်တော်များများတော့သိပြီးသားတွေလည်းဖြစ်ကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်...ကျွန်တော်က
အနည်းဆုံး 1 GB လောက်ရှိမယ့် Thumb Drive လေးတစ်ခု လိုအပ်ပါတယ်...
Capacity များလေကောင်းလေဆိုပါတော့ဗျာ. ဒါပေမယ့် သိပ်အများကြီးလည်း မလိုပါဘူး.ကျွန်တော်တော့ 4G လေးနဲ့လုပ်လိုက်ပါတယ်...
အဲဒီ့ Thumb Drive လေးကို ကွန်ပြူတာမှာ တပ်လိုက်ပါ. ကိုယ့်ကွန်ပြူတာမှာ အဲဒီ့ Drive လေးပေါ်လာအောင်စောင့်ပါ. မှတ်ထားလိုက်ပါ. ဥပမာ Drive F: စသည်ဖြင့်ပေါ....
တစ်ခြားစက်တွေ ဘယ်လိုနေတယ်တော့မသိဘူး. ကျွန်တော်ကတော့ XP ရော Windows7ရောကို သုံးနေတယ် သဘောတရားချင်းအတူတူပဲ. ဒါကြောင့် Vista Users တွေ၊ တစ်ခြား Windows သုံးသူတွေလည်း ကျွန်တော်ခု ဆွေးနွေးမယ့် အိုင်ဒီယာလေးကိုပဲ ကြည့်လိုက်ပါ. လိုက်ရှာကြည့်လိုက်ပါ. အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်....
လောလောဆယ်တော့ XP/Win7သမားတွေအတွက်ပဲ ရည်ရွယ်ပြောလိုက်မယ်ဗျာ. နော်. Windows7မှာကျတော့ နည်းနည်းလေး ကွဲတယ်.တခြားနည်းနည်းတော့မတူညီမှုလေးတွေအနည်းငယ်တော့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်....
My Computer ကို သွားပါ. Right Click နှိပ်ပြီး Properties ကိုသွားလိုက်ပါ.
Advanced Tab လေးကို နှိပ်ပါ. (Win7သမားတွေအတွက်ကတော့ ဘယ်ဖက် ကော်လန်လေးမှာ ရှိနေတဲ့ Advanced System Settings ဆိုတာလေးကို ရွေးပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်.) ပြီးရင်တော့ Performance Settings ကို ဆက်သွားပါ. (၃) Advanced ကို ဆက်နှိပ်ပါ. (၄) Virtual Memory ဆိုပြီး Pop Up Window လေးတစ်ခု ပွင့်လာပါလိမ့်မယ်. Change ကိုနှိပ်ပါ. အဲဒီ့ထဲမှာမှ ခုနက ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Thumb Drive လေးကို ရွေးပေးပါ. ကျွန်တော့်မှာတော့ Drive F လို့ပေါ်ပါတယ်. အဲလိုရွေးလိုက်တာနဲ့ Paging File Size for Selected Drive ဆိုတဲ့ စာကြောင်းလေးအောက်မှာ ကိုယ့်ရဲ့ Thumb Drive လေးပေါ်လာမှာဖြစ်ပြီး Space Available ဆိုတာလေးလည်း ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်. င်္For XP
Win7သမားတွေအတွက်ကတော့ Automatically manage paging file size for all drives ဆိုတဲ့ Box လေးကို Uncheck ပြန်လုပ်ပေးရပါမယ်. XP သမားတွေကတော့ မလိုပါဘူး. ပြီးသွားရင်တော့ Custom Size ကို ရွေုးလိုက်ပါ. Space Available မှာ ပေါ်နေတဲ့ Thumb Drive ရဲ့ storage capacity လေးကို အပေါ်ကွက်လပ်လေးမှာရော အောက်ကွက်လပ်လေးမှာပါ ရိုက်ထည့်ပေးလိုက်ပါ. ..
Set ကိုနှိပ်ပါ. Ok ကိုနှိပ်ပါ. (၇) ကွန်ပြူတာကို Restart ပြန်လုပ်ပါ....အနည်းငယ်အဆင်မပြေမှုလေးတွေရှိခဲ့ပါက ဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်...အားလုံးအဆင်ပြေပါစေ.။